Yeman oo ka Degtay Tahriibta faraha badan ee ku soo jeeda dalkeeda | maakhir.com
Yeman oo ka Degtay Tahriibta faraha badan ee ku soo jeeda dalkeeda
San”ca:- Dawlada Dalkaasi Yeman ayaa walaac ka Muujiyay Boqoolaalka kun ee ku soo jeeda Xeebaha dalkeeda, Yeman waxay sheegtay inay aad ugu xun tahay dadka faraha badan ee kus oo qul qulaya Dalka Yeman kuwaasi oo qaarkood aanay Nabad ku soo gaadhin gudaha Dalka,iyada oo ay dilaan oo ay bada ku qobaan raga wata Doomaha ay dadkaasi ka soo racaan Dalka Somaliya.
Dawlada Dalka Yeman ayaa shaaca ka qaaday inay aad ugu wel wel santahay Boqolaalka kun ee Ruux oo ku soo wajahan Dalka Yaman, Dawladaasi waxay sheegtay inay taalaabiyin badan ay qaadeen balse ay dhankooda gabeen Maamulada ka jira Dalka Somaliya gaar ahaan Maamulka Puntland oo ah kan Deegaankiisa laga soo dada gureeyo Tahriibta.
Guddiga Qaran ee u qaabilsan dalka Yemen arrimaha Qaxootiga ayaa si weyn uga digay in sare ay usii kaceyso tiradda Qaxootiga Afrikaanka ah ee ku dhimanaya xeebaha dalka Yemen, Gudigaasi waxay kaloo sheegeen inay dadka ugu dan ee ku dhintay xeebaha Dalka Yeman ay yihiin dadka Asal ahaan ka soo jeeda Qomiyada Ormiga iyo waliba dadkale oo Somali ah.
Wasiir xigeenka rimaha dibada ee Dalka Yeman isla markaan ku jira Gudiga loo xilsaaray inay wax ka qabtaan arimaha Tahriibta Ninka lagu magcaabo Mr Ali Mutahna ayaa warbaahinta ka sheegay inay beesha Caalamku ka gaabisay wax ka qabashada dadka ku dhimanaya xeebahada Dalka Yeman.
Mr Mutahna waxa uu sheegay inay Dawlada Yema ugu baaqayso Beesha caalmaka inay soo jeedaaliyaan masiibada ka taagan inta u dhexaysa Xeebaha Dalka Somaliya iyo kuwa Dalka Yeman oo ay maalinkasta ku dhintaa Boqolaal kun oo Ruux.
Hadalkaasi ka soo yeedhay Xukuumada Yeman ayaa ku soo aadaya xili Cade Muuse uu sheeciyay inuu Maamulkiis wax ka qabanayo arimaha Tahriibta isaga oo farta ku fiiqay in Dil toogasha ah lagu xukumayo ruuxii lagu soo oogo inuu lug wayn ku leeyahay arimaha Tahriibta.
« Warshadii Kalluunka ee Laasqoray ayaa la xidhay ka dib kalluunkii oo Gabaabsi galay
Shirka ka socda Haatan Xarunta Madaxtooyada ee Villa Somaliya »